Ziziphi iindlela ezona ndlela zilungele ukwandisa i-website ye-SEO?
Uyilo lwewebhu luyinxalenye ebaluleke kakhulu kubume bakho kwi-intanethi njengoko yinto yokuqala yokubona abathengi bakho xa belandela isizinda sakho. I-website yoyilo isebenza njengekhadi leshishini lakho shishini. Khawucinge ukuba unika amaqabane akho shishini kunye nabathengi kwikhadi lebhiziniselwano elibizileyo kwaye elibi elingenayo nayiphi na inkcazelo esemgangathweni.
Baza kukubona njani?
baninzi banokuthintela ukubambisana nawe - arcelik esenler yetkili servisi telefon. Imeko efanayo ingenzeka kwi-intanethi ye-intanethi apho iindwendwe zakho zewebhu zenza isigqibo esekelwe kwimbonakalo yendawo yakho kunye nomxholo owanikezela wona. Ukuba ungathanda ukwenza isakhiwo sakho sesayithi njengesiqalo esiphezulu esinamandla, umbuzo othi "njani ukwandisa isayithi ye-SEO".
Inyaniso iya kuthiwa, le ngxaki ayikwazi ukuphendulwa ngabani ngaphandle kweendwendwe zakho, kwaye zenze ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuqonda ukuba ngabafuna ntoni abathengi, kufuneka ube nekhompyutha efanelekileyo. Esi sixhobo sifanele sikunikeze kunye nedatha yobungakanani kunye nobungakanani malunga nesipiliyoni sakho sokufumana isayithi. Ngoko, ukuphucula i-website yakho yokwakha nokwenza kube lula ngomsebenzisi, kubalulekile ukuqonda ukuba kutheni abasebenzisi beza kwindawo yakho kuqala.
Kulo nqaku, uya kufumana iindlela zobuchule bokucwangcisa ukusetyenziswa kunye neendlela zokujonga ukuphendula kwamakhasimende akho ekubuyiseni kwakhona.
Amasu afanelekileyo okwenziwa kwewebhusayithi yakho
Kukho umlinganiselo ongapheliyo wobuchule ofuna ukuwuqwalasela xa uhlakulela umthombo wakho wewebhu. Nangona kunjalo, sinokuhlukanisa izinto ezintathu ezibalulekileyo ezifunekayo zibe yinxalenye yendawo nganye:
Ukuthumela imiyalezo emfutshane
Zonke ezi zixhobo ze-SEO zinokuphucula kakhulu umsebenzisi wakho-ubumnandi kunye nokukunceda ukuba uhlangabezane neenjongo zezoshishino zakho. Kule nqanaba, uya kufumana izinto ezibalulekileyo zokukwandisa ukucwangciswa kwendawo yakho ukuze ukhange abathengi abangakumbi kunye nemali engenayo.
Kumelwe ukuba ngokucacileyo ulungise isakhiwo sakho kwisayithi ukuze wenze lula ukuhamba. Ngexa uphucula uyilo lwakho, soloko ujonga izivakashi zakho. Njengabasebenzisi, amava kubaluleke kakhulu kwi-Google factor factor. Abathengi banokuthi bakwazi ukuhamba ngokukhawuleza kumaphepha ewebhusayithi ukuze bafumane ulwazi oluyidingayo. Kuya kuthintela iindwendwe zakho ukuba zingaphelelwa umonde kwaye zinciphise izinga le-website. Ukongezelela, umgangatho onobulunga kunye nobungakanani bomsebenzisi kufuneka ube nokwakha ngokuqinisekileyo ukuqinisekisa ukuba umxholo ufikeleleka lula ngabavakashi.
Namhla, ukulungiswa kwegridi kuyathandwa phakathi kwe-webmasters njengoko zihamba ngokuguquguqukayo. Iinkqubo ezithile zegridi ziquka iskimu esabelayo, inkqubo ye-960 yeGridi, i-Bootstrap 3 kunye nezinye izixhobo ezisemgangathweni. Ezi nkqubo zinceda abaqulunqi bewebhu ukuba bakhe iziklomelo zesayithi ezihlelwe kakuhle kwaye zilula.
Njengoko iGoogle ixabisa iiwebhusayithi eziphendulayo eziphathekayo kwaye zithatha njengento yokubeka indawo, kufuneka ube ne-website yoyilo ephendulayo kuwo onke amadivayisi eselula. Yonke into ebalulekileyo yewebhusayithi ifanele ibe ilungelelwe ngokufanelekileyo ukuba ivumelane nemingcele yezikrini zeselula. Ngaphezu koko, kufuneka ushiye isikhala phakathi kwamaqhosha nemisebenzi kwizintlu ukwenzela ukuba iindwendwe zakho zikwazi ukuhamba ngokulula indawo yakho kwii-smartphones zazo.Ndikwacebisa ukuba ugweme nayiphi na eyomeleleyo yokwakhiwa kwakhiwo kunye ne-pop-ups kwisakhiwo sokuphendula njengoko abanako ukubonakaliswa ngokupheleleyo kwiifowuni.
Ukwenza ukuba uyilo lakho lewebhu lithandeke kwaye lisebenzise umsebenzisi, kufuneka usebenzise amaxwebhu afanelekileyo. Qinisekisa ukuba amafonti akho asemvelo kwaye afanelekele nayiphi na isikrini. Ngaphandle koko, umxholo wakho ungabonakala uncinci kwaye ungafundwanga. Ngokomzekelo, iicalic kwiimvakalisi ezide ziyinkimbinkimbi inkqubo yokufunda njengoko iileta zidibanisana. Ngaphezu koko, ndicebisa ukuba ndiphephe inani leenhlamvu ezinkulu njengoko kubonakala kungenangqondo kubafundi.
Ukubhekisela kubasebenzisi kwizinto ezibalulekileyo kwisayithi lakho, sebenzisa izikhala ezimhlophe. Ivumela abasebenzisi ukuba baphule kuzo zonke izinto ezibonakalayo kunye nekrini kwimixholo yakho ngokufanelekileyo. Ngokuphumeza izikhala ezimhlophe, uya kuphucula umboniso wakho wephepha. Ngaphezu koko, yindlela efanelekileyo yokwenza umxholo wakho ubonakale kwizikrini ezahlukeneyo zesayizi.
Cinga ngeskimu sakho sombala. Njengoko imibala inokuchaphazela iimvakalelo zakho zomthengi kunye nemizwelo, kufuneka usebenzise imibala edibeneyo kwaye ugweme izinto ezininzi ezikhanyayo. Yenza abaxhasi bakho bazive benomdla ngokuziphumeza kwiimpawu zemibala yamehlo. Ngaphezu koko, ungasebenzisi imibala emininzi njengoko kunokuphazamisa umthengi ekuthengeni.
Ukuphuculwa kweenjini zokusesha yinkalo ebaluleke kakhulu ekuphuculeni ukuqhubela phambili kwi-intanethi njengoko yenza i-traffic ejoliswe kwiwebhusayithi.
I-SEO inceda ukucacisa ukuba yeyiphi impazamo efunekayo kuboniswe ngabathengi abathile. Ukuphucula ukubonakaliswa kwempawu kunye nokuphakamisa ukuguqulwa kwewebhusayithi, kufuneka uqalise i-SEO. Iquka ukusetyenziswa kwamagama asemqoka, izihloko, iintloko, imifanekiso, i-infographics, ukukhupha iividiyo, ukuxhumela iividiyo, zangaphakathi kunye zangaphandle, ukucaciswa kwemeta kunye nomxholo. Umxholo uyinkosi, kwaye kuyona ndlela enokukhetha ngayo indlela onokwenza ngayo iwebhusayithi yakho ye-SEO.
Ukwenza umxholo wakho ubonakale kumabini ophando kunye nabathengi bakho abanakho, qiniseka ukuba ubandakanyeke kakhulu kwiimfuno zoshishino lwakho zophando kuyo. Abasebenzisi bangathanda ukufumana ulwazi olufunekayo ekugqibeleni kokuqala, yingakho kufuneka uyenze umxholo ochaphazelekayo kwiphepha lakho lula ukufumana. Ikhasi lakho lewebhu kufuneka libe lula ukuyiphenya. Ngoko, kufuneka uphephe ukugxila kwegama elingundoqo kunye neetekisi ezide. Qinisekisa ukuba umxholo wakho uhlelwe kakuhle kwaye ubandakanye izintlu zeenombolo kunye neenombolo, imihlathi encinci, izihloko kunye nemixholo engezantsi.
Ngaphezu koko, kubalulekile ukugxila kwinjongo ephambili yesayithi lakho. Kufuneka uvelise ulwalathiso oluphambili lwesayithi lakho kwikhaya lasekhaya ukuvumela ukuba abatyeleli bazi ukuba indawo yakho ibonakalisiwe. Udinga ukugxila kwikharityhulam yekhaya ukubamba ukunakekelwa kwabasebenzisi kwaye ubandakanyeke ekulandeleni amanye amaphepha ukuze ujonge ngesihloko.
Kucetyiswa ukuba kugcinwe iwebhusayithi elula kwaye ihambelana. Isakhiwo sewebhusayithi esilula senza ukuba iindwendwe zihambe ngephepha ngokulula kwaye emva koko ziphucule amava abo. Kwili hlabathi langoku, abasebenzisi abafuni ukuchitha ixesha befuna ulwazi olufunekayo. Bafuna ukukhawuleza kwaye kulula. Yingakho umxholo wakho umele ubekwe buchule ukuze ubonakale kuwo wonke umsebenzisi. Kufuneka uphephe naluphi na ulwazi olungadingekile kwaye unciphise inani leetekisi ukuya kuncinci.